IHydroxypropyl methylcellulose ayinangozi emzimbeni womuntu, i-hydroxypropyl methyl cellulose iphephile futhi ayinabuthi, ingasetshenziswa njengesengezo sokudla, ayinakho ukushisa, futhi ayinakho ukucasuka esikhunjeni nasesikhunjeni se-mucous. Ngokuvamile kubhekwa njengokudla okuphephile nsuku zonke okuvunyelwe kwe-25mg / kg, prot ...
Izakhiwo nokusetshenziswa kwempuphu etholakala kabusha
I-redispersible powder I-redisersible powder i-latex isabalalisa iyimpuphu ehlakazekile eyenziwe nge-polymer polymer emulsion ngokufafaza ngomquba. Inokuphazamiseka okuhle futhi ingabuyiselwa ngaphakathi kwe-emulsion ye-polymer ezinzile ngemuva kokungeza amanzi. Ukusebenza kufana ncamashi ne-emulsion yokuqala. Th ...
Ukusetshenziswa Kwe-Latex Powder Eyisisekelo
I-Redispersible powder ungumpuphu owenziwe ngokufafaza i-polymer emulsion, ebizwa nangokuthi yirabha eyimpuphu eyomile. Le powder ingancishiswa ngokushesha ibe yi-emulsion ngemuva kokuxhumana namanzi, futhi igcine izakhiwo ezifanayo ne-emulsion yasekuqaleni, okungukuthi, kuzokwakhiwa ifilimu ngemuva kwe-evapor yamanzi ...